Ndiyakuhalalisela ngo-Matshi 8 ofunda nabo kwivesi, kwiprose. Indlela yovuyisana nabo esikolweni nabo ngoMatshi 8
Imibongo kunye neprose yokuvuyisana nabafundi beklasi ukusuka ngoMatshi 8.
Ngomhla wohlobo lwekhefu lokuqala, oluzinikezelwe kwimini yabasetyhini, amakhwenkwe aseminyaka yonke ayilungisa amantombazana. Amantombazana alindele ngoMatshi 8 ngokungaphelelwa ngumonde, kuba namhlanje banokugqoka iimpahla zabo ezizithandayo, benze i-hairstyle ehle, kwaye baya kunqulwa ngabantu bonke, kuquka nabalingana nabo, abahlala kwimihla yesiqhelo. Abafundi beklasi bayavuyisana nabo esikolweni, bekhetha okokuqala, baqhayisa kwaye banomdla. Njengomthetho, kwizikolo ngo-Matshi 8 bhiyozela ngezinga elikhulu: eklasini babeka amacwecwe, balungiselele i-disco, banike izipho baze bavulele abafundi eklasini ngamagama.
Ukwenza usuku lwamazwe ngamazwe lube lukhanye kwaye luhle kakhulu abafana bafunde imibongo emfutshane okanye bavuyiswe ngamantombazana abathandekayo nabathandekayo eklasini. Ukuba kukho umbongi eklasini, unokubhala iindinyana ezintle kunye neengqungquthela malunga nentombazana nganye, kodwa ezininzi iiklasi azinabafana abanetalente. Kule meko, bangasebenzisa iindinyana ezenziwe ngokulungelelanisa kunye nokuvuyiswa ngeprose, abatshatanga nabo eklasini ngoMatshi 8.
Uvuyayo kumantombazana kwindinyana
Iinqweno zifuna ukufunda nabo ngo-Matshi 8
Iminqweno enhle yamantombazana kwiprose
Nina ningabafundi kunye nabo nabahlobo abakhulu!
Sinobuhle obuninzi kunye nawe ngexesha lokuzonwabisa.
Ngamanye amaxesha siyafunga, kodwa ngenxa yobuhlobo,
Wena uyaqonda ukuba oku kuyimfuneko!
Ngaphandle koko, sinokubonisa njani ukuba uyasithanda?
Awukholelwa kwizenzo, kodwa kumagama athando!
Abathandekayo bethu, afunda nabo, amantombazana,
Ndiyakuhalalisela ngosuku lwentwasahlobo!
Uzukisa abafundi, ubuhle kunye neengqungquthela,
Ngentsike emehlweni akhe, entliziyweni yakhe ngomlilo.
Siyakuvuyiswa ngokubunjwa kwamadoda,
Umfazi unoyolo, uvuyo, inhlanhla.
Zonke iimfuno, umonde, amandla kunye nozuko,
Ukuxazulula yonke imisebenzi enzima kakhulu.
Yiba neentombi ezonwabileyo -
Vumani iingoma kuze kube sekuseni.
Akukho mhle kwihlabathi,
Amantombazana akho amnandi, amabhinqa!
Kuwe kuthi sonke sibonge -
Ngokuthobeka, lakho iklasi.
Ndazihlamba iifama zam. Ihembe limhlophe.
Kwaye umnxeba kayise wayakwazi ukubopha.
Intliziyo yentombazana encinci.
Ngubani na oya kummisela ukuba avaliwe?
Xa edieni ubu budenge buphelile:
Yonke into iyanyibilika ngeenxa zonke, ukusuka ilanga ilanga,
Kwaye e-Olya, naseKatyya, kwaye ekuKhanyeni ngothando,
Ibonisa i-roulades ngendlela yokucula.
Kwaye ngo-Matshi, isibhozo asikwazanga ukumelana naye.
Kwaye kwiincwadi akukho mzekelo ofanelekileyo,
Emva koko, u-Olya ungumfundi obalaseleyo, uKatyya ubuhle,
Kwaye uSvetka ... kakuhle, ngokubanzi, ubukhulu besithathu ...
Ndiza kukubamba bonke, afunda nabo!
Yaye intetho yam iya kushushu!
Ndingumphefumlo omkhulu! Nina nonke nidukuza,
Ndakufumana ubude buni ehlombe ...
Le holide yintombazana,
Emva kwakho konke, unabesetyhini abaneentambo.
Kodwa into enhle.
Asikhubekisi usuku lonke,
Sivula iminyango eklasini, Sikuvumela yonke indawo.
Nina mantombazana ulungile!
Ukuze asincede sibe nobuvila,
Iholidi liyimini nje.
Intombazana entle kwiqela elilandelayo,
Kuwe ngoMatshi, ngo-8 ndifuna ukuthetha into enye:
Ukumomotheka okunjalo kumnandi kwaye kumnandi,
Andizange ndidibane kunye neengxelo zobomi okanye kwi-ofisi yebhokisi.
Ndi nqwenela ukuhlangabezana naloo uphuphayo,
kwaye soloko uvuyayo, ungalahlekelwa ngumomotheka!
Yaye ukuba umfanekiso wesikhulu uyenzela kuphela -
Emva koko ndiya kuba mfutshane: kunye nam siya kuhamba!
Amantombazana-asemantombazaneni, ukususela ngoMatshi 8!
Smile uze uhambe eklasini!
Siyakuvuyiswa ngephupha lakho, ngokunyanisekileyo, okulungileyo kunabo bonke.
Kwaye siphendula sifuna ukuva ukuhleka nje.
Vumela ukuba le ntwasahlobo ithambe,
Kwaye umnxeba yonke imilenze idlala!
Sikunqwenela impilo, uthando kunye nobuhle!
Kwangathi amaphupha angaphantsi azaliseke!
Ngaba mnandi ukuthokoza abafundi esiklasini ngoMatshi 8
Iimpawu ziyi-powdered, i-braids ichithekile,
Iiponji ziyahlanjululwa, amehlo ahlulekile.
Iklasini ayifungeli, umlawuli akakhubekisi,
Abafana bayamemeza, kwaye intliziyo ibetha!
Mncinci, mnandi, mncinci.
Vumela indlela yakho yobomi ibe nemihlali!
Ngeholide ungowesifazane, ngaba ngabahlobo bam!
Vumela i-nightingales ingoma imnandi phantsi kweefestile!
Ewe, mantombazana, sasilindele wena!
Ngomhla wesibhozo kaKwindla siqongqoza emnyango!
Akulula kuba abalimi kweli holide -
Kufuneka baqubude phambi kwethu!
Ukucoca kuya kuwela kumagxa omntu ngeeholide,
Nawe, uzimisele ukupheka!
Sinike izipho ezahlukeneyo -
Indlela eya entliziyweni yethu iya kuvuleka kuwe!
Umfundi ofunda naye kanye ngonyaka
Ngamnye, bhala upha,
Kwaye ubonise, uthi,
Yaye uya kusibonisa iimpazamo.
Kuba bafana, kusindisa -
Onke amantombazana ayavuya ukunika
(Unyaka kwakufuneka ulinde).
Ngenxa yokuba sifisa
Ufunda kuphela "ezintlanu"
Ngoko sifuna ngomhla wesibhozo kaMatshi,
Amantombazana avela kwiidesksi ezilandelayo.
Siyavuyisana ngemibandela yobubele ukususela ngoMatshi 8,
Ngentshiseko nangokuvuya njengoko kunokwenzeka,
Bonke abo bonke imihla edeskini,
Usinika ukukopisha, ukusindisa kootitshala.
Amantombazana ethu abathandekayo, vuyisana!
Uhlakaniphile, unobumba. Uhle kakhulu.
Sidinga amandla amaninzi okunyamezela,
Kwaye kwimeko yobomi obuhle.
Usixolele ukuba sihlala sixhaphaza,
Nakuphi na ukulwa, ukuba kukho nantoni na!
Akunabantwana abalingana nabo - siyazi ngokuqinisekileyo.
Ngomhla wamaZwe wamazwe ngamazwe!
Ngomhla woMatshi 8
Singahamba kwiidesiki -
Unako ngisho - ngaphandle kwamapente.
Kodwa, ewe, e-bhulukhwe -
Ngenxa yokuba iholide ...
Ewe, apho ngaphandle kwakho, esihogweni
Phila ngaphandle kwakho, ujikeleze ngaphandle kwakho,
(Ngomxholo weklasi, kodwa iklasi ngaphandle kwakho).
Vuyiswa! Kwiprofayili, phambi
Siyakunqanda amawaka angamawaka.
Matshi 8 Ndiyathanda
Mantombazana enemihla enhle,
Ukuze ilanga lihlale likhanya
Kwaye kwakusasa i-nightingale ngaphandle kwefestile!
Amakhwenkwe, ukuze ningakhubeki,
Iibhondi, ukuze ungadli,
Nangona ngaphandle kwayo, ndiyazi,
Kwaye nothando lwenkwenkwe,
Emva koko, ungathini ukuguquka, ukuba umsila,
Uqobo kwaye ucela - udonsa!
Abafana ukuya endlwini ukuba bathwale,
Nceda nceda ungalibali
Kwaye banikela imibongo kuwe!
Unyaka wonke uhle kakhulu,
Abafundi - njengamaphupha,
Uthando, bahlobo bethu,
Ndikunqwenela ulonwabo ngokufudumele kwentwasahlobo.
Vumela uthando luveze amandla,
Uthwala zonke ezandleni zakhe,
Yilowo nalowo makabe mnandi,
Hlala ngonwabe emafini.
Kuphela ngale ndlela, kwaye kungenjalo,
Caress, ububele, ukufudumala,
Hlala ngokukhululekile - nge-villa, villa,
Ehlabathini lokukhanya nokulungileyo.
Namhlanje sivuyisana ngomhla we-8 kuMatshi
Bonke abo babelana nathi eklasini iidesksi!
Bonke abo banyamezela i-antics sonke!
Bonke abo basinika ikhaya lokubhala!
Sinqwenela ukuba nonke ulula ukufunda
Ukuhleka ngaphezulu, mnandi ngakumbi
Ukuba ngumgangatho wesikolo wobuhle
Yaye ukuze onke amaphupha akho agcwaliseke!
Kungekudala iholide yamantombazana!
Owu, eze ngoMatshi 8
Kwaye abafana baya kutshisa!
Oo, ingxaki, inkathazo, inkathazo!
Kwinqanaba lethu leapfrog,
Ngenxa yezipho zenkwenkwe
Ukhutshiwe naphi na!
Kwinqanaba lentombazana esinalo -
Kwaye ukuvuma, thina bafana,
Uhlala uhle kakhulu:
Thina kubo, kwenzeka, sithatha,
Kuphela ngaphandle komkhwa!
Ufika njani utshintsho
Sithanda ukudlala nawe:
Sibalekile, ukuba kukho imikhosi,
Ukuze bafumane nathi!
Iincwadi zifana nokufunda.
Musa ukulibala izifundo
Kuwe namhlanje siyathembisa
Siza kukunika iintyatyambo!
Kodwa nathi sifuna ukusho:
Njalo, kuyo yonke indawo nakuyo yonke indawo
Siya kukhusela ngokukhuselekileyo!
Ebhakabhakeni ilanga likhanya ngokukhawuleza,
Iintaka zicula ngokuthokoza.
Ba nqwenela u lonwabo
Kwaye iindumiso zentwasahlobo zithumela!
Iingqumbo zentlaka ezivuthayo:
Buthana nje nge-parade!
Zonke iikhati zenziwe
siza kusitya iifestile zethu,
Masihambe namhlanje namhlanje
Kwaye asiyi kulwa.
Yaye ungadingi kwiCretaceous.
Namhlanje thina, njengama-dandies,
Ngaphambi kwakho kwibhodi,
Kodwa mhle kunamantombazana ethu
Konke okufanayo, asizange senze!
Amehlo atsha ngomlilo,
Yaye ukumomotheka kwakho
Bayekezela ilanga emini!
Nina mantombazana nisemgangathweni nje!
Yingakho sifuna ukuba
Wonke umntu ufana nawe!
Sinqwenela kuphela uvuyo,
Kwaye siya kukuxelela imfihlelo:
Amantombazana ethu amnandi
Akukho sikolweni nje kwisikolo sonke!
Awuzange ulinganise okwamanje
Ifihliwe amandla ayo.
Ndaphinda ndafumana i-deuce
Endaweni yokufunda nokudumisa.
Unet talente kakhulu,
I talente engenanto ufihla yakho.
Kwi "Bear," phakathi kwezinye izinto
Loo nyaka wawungowesibini.
Iincwadi ezininzi ezahlukeneyo ozifundayo,
Kwi geography i namandla ...
Ukunikela ngento engenakuphakamisa,
Yintoni, abahlanu abayifunayo?
Nanku kunjalo akuyi kuba buvila,
Yonke imisebenzi yokwenza ...
Kungcono ukuba ufunde,
Zihlanu kuphela zifumana.
Ukunconywa ngo-Matshi 8 ofunda nabo kumakhwenkwe
Bahlobo abathandana nabo, namhlanje ngumhla woLuntu lwaMaTyhini lwaMazwe ngamazwe, ngoko ndiyakuvuyisela ngeli holide lekhefu, ubuhle kunye nobufazi. Ndiyintlekisa kakhulu ukuba ningabantwana ofunda nabo kwaye niyihobise ngobungqina bakho imihla ngemihla, ukwenza ukuba isifundo singabi mnandi kwaye sithandeke.
Wena unxibelelo lweklasini yethu, kwaye nangona kungabikho abafazi abazimeleyo, kodwa ubuhle obuzinzile. Sifuna ukunqwenela ukuba uhlale ngomhla we-8 kaMatshi njengovuyo kunye nemimoya, ungalokothi ulahlekelwe yintliziyo, kwaye ukuphatha izilumko zethu kunye neengqungquthela ngokuzinzileyo nangokucokisekileyo.
Mantombazana ethu! Thina, isiqingatha esinamandla seklasi lethu, kunye kunye nentliziyo yonke siyakuhalalisela ngoMatshi 8. Unamafairies amahle, ubuhle, amantombazana anengqiqo. Siqinisekile ukuba uya kuba ngabafazi abakhulu, oomama, abakwazi ukuqonda onke amaphupha akho kunye nezicwangciso. Sinqwenela ukuba udale intsapho eqinile, uzalise abantwana abaneempilo kwixesha elizayo, fumana indawo yakho yokwenene ebomini kwaye yenza kuphela oko kukuvuyisa. Siyakuthanda ngokwenene!
Yintoni enokukubonisa ngoMatshi 8 - utitshala, umqeqeshi, intombazana, intombi, intombi, intombazana - imizekelo kunye neengcamango - Izipho zokuqala zomama ngo-Matshi 8 - kwindodana nentombi
Iingoma ngo-Matshi 8 kumama, ugogo-ngamantombazana, abantwana, abaselula-iingoma zanamhlanje neengane - Iingoma ezilungileyo ngo-Matshi 8 ngamazwi kunye namazwi
Inkukhu ye-Chicken kwi-spicy sauce yemifuno
Ukupheka kwezitya ezintle nezonandi
Ukupheka inyama ngeengcungcuthe kwi-multivariate: iresiphi ngesithombe